Ezr 2 | Mal1865 | STEP | Ary izao no olona amin'izany tany izany izay niakatra avy amin'ny fahababoana, izay nobaboin'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, ka nentiny ho any Babylona, ary niverina ho any Jerosalema sy Joda, samy ho any an-tanànany avy,
Ny anaran'ny Jiosy nentin'i Zerobabela nody
1 Ary izao no olona amin'izany tany izany izay niakatra avy amin'ny fahababoana, izay nobaboin'i Nebokadnezara, mpanjakan'i Babylona, ka nentiny ho any Babylona, ary niverina ho any Jerosalema sy Joda, samy ho any an-tanànany avy, 2 dia ny olona izay niaraka tamin'i Zerobabela sy Jesoa sy Nehemia sy Seraia sy Relaia sy Mordekay sy Bilsana sy Mispara sy Bigvay sy Rehoma ary Bana. Ary ny isan'ny lehilahy tamin'ny Isiraely dia izao:
3 Ny taranak'i Parosy dia roa amby fito-polo amby zato sy roa arivo; 4 ny taranak'i Sefatia dia roa amby fito-polo amby telon-jato; 5 ny taranak'i Ara dia dimy amby fito-polo amby fiton-jato; 6 ny taranak'i Pahatamoaba, avy tamin'ny zanak'i Jesoa sy Joaba, dia roa ambin'ny folo amby valon-jato sy roa arivo; 7 ny taranak'i Eliama dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo; 8 ny taranak'i Zato dia dimy amby efa-polo amby sivin-jato; 9 ny taranak'i Zakay dia enim-polo amby fiton-jato; 10 ny taranak'i Bany dia roa amby efa-polo amby enin-jato; 11 ny taranak'i Bebay dia telo amby roa-polo amby enin-jato; 12 ny taranak'i Azgada dia roa amby roa-polo amby roan-jato sy arivo; 13 ny taranak'i Adonikama dia enina amby enim-polo amby enin-jato; 14 ny taranak'i Bigvay dia enina amby dimam-polo sy roa arivo; 15 ny taranak'i Adina dia efatra amby dimam-polo amby efa-jato; 16 ny taranak'i Atera, avy tamin'i Hezekia, dia valo amby sivi-folo; 17 ny taranak'i Bezay dia telo amby roa-polo amby telon-jato; 18 ny taranak'i Jora dia roa ambin'ny folo amby zato; 19 ny taranak'i Hasoma dia telo amby roa-polo amby roan-jato; 20 ny zanak'i Gibara dia dimy amby sivi-folo; 21 ny zanak'i Betlehema dia telo amby roa-polo amby zato; 22 ny mponina tany Netofa dia enina amby dimam-polo; 23 ny mponina tany Anatota dia valo amby roa-polo amby zato; 24 ny zanak'i Azmaveta dia roa amby efa-polo; 25 ny zanak'i Kiriat-arima sy Kefira ary Berota dia telo amby efa-polo amby fiton-jato; 26 ny zanak'i Rama sy Gaba dia iraika amby roa-polo amby enin-jato; 27 ny mponina tany Mikmasy dia roa amby roa-polo amby zato; 28 ny mponina tany Betela sy Ay dia telo amby roa-polo amby roan-jato; 29 ny zanak'i Nebo dia roa amby dimam-polo; 30 ny taranak i Magbisy dia enina amby dimam-polo amby zato; 31 ny zanak'ilay Elama anankiray dia efatra amby dimam-polo amby roan-jato sy arivo; 32 ny taranak'i Harima dia roa-polo amby telon-jato; 33 ny zanak'i Loda sy Hadida ary Ono dia dimy amby roa-polo amby fiton-jato; 34 ny zanak'i Jeriko dia dimy amby efa-polo amby telon-jato; 35 ny zanak'i Sena dia telo-polo amby enin-jato sy telo arivo.
36 Ary ny mpisorona koa dia izao: Ny taranak'i Jedaia, avy tamin'ny mpianakavin'i Jesoa, dia telo amby fito-polo amby sivin-jato; 37 ny taranak'Imera dia roa amby dimam-polo sy arivo; 38 ny taranak'i Pasora dia fito amby efa-polo amby roan-jato sy arivo; 39 ny taranak'i Harima dia fito ambin'ny folo sy arivo.
43 Ary ny Netinima koa dia izao: Ny taranak'i Ziha, ny taranak'i Hasofa, ny taranak'i Tabaota, 44 ny taranak'i Kerosa, ny taranak'i Siaha, ny taranak'i Padona, 45 ny taranak'i Lebana, ny taranak'i Hagabaha, ny taranak'i Akoba, 46 ny taranak'i Hagaba, ny taranak'i Salmay, ny taranak'i Hanana, 47 ny taranak'i Gidela, ny taranak'i Gahara, ny taranak'i Reaia, 48 ny taranak'i Rezina, ny taranak'i Nekoda, ny taranak'i Gazama, 49 ny taranak'i Oza, ny taranak'i Pasea, ny taranak'i Besay, 50 ny taranak'i Asna, ny taranaky ny Meonita, ny taranaky ny Nefisita, 51 ny taranak'i Bakboka, ny taranak'i Hakofa, ny taranak'i Harora, 52 ny taranak'i Bazlota, ny taranak'i Mehida, ny taranak'i Harsa, 53 ny taranak'i Barkosa, ny taranak'i Sisera, ny taranak'i Tema, 54 ny taranak'i Nezia, ny taranak'i Hatifa. 55 Ary ny taranaky ny mpanompon'i Solomona koa dia izao: Ny taranak'i Sotahy, ny taranak'i Sofereta, ny taranak'i Peroda, 56 ny taranak'i Jala, ny taranak'i Darkona, ny taranak'i Gidela, 57 ny taranak'i Sefatia, ny taranak'i Hatila, ny taranak'i Pokereta-hazebaima, ny taranak'i Amy.
59 Ary izao no niakatra avy tany Tela-mela sy Tela-harsa sy Keroba sy Adana ary Imera (fa tsy nahalaza ny fianakaviany sy ny firazanany izy, na avy tamin'ny Isiraely, na tsia): 60 ny taranak'i Delaia, ny taranak'i Tobia, ny taranak'i Nekoda, dia roa amby dimam-polo amby enin-jato. 61 Ary ny avy tamin'ny taranaky ny mpisorona dia izao: Ny taranak'i Habaia, ny taranak'i Hakoza, ny taranak'i Barzilay; nampaka-bady avy tamin'ny zanakavavin'i Barzilay Gileadita io, ka dia notononina araka ny anarany. 62 Ireo no nitady ny soratra filazana ny razany, fa tsy hita izany; dia natao ho tsy madio izy ka nesorina tamin'ny fisoronana. 63 Ary ny governora nilaza taminy fa tsy mahazo mihinana ny zavatra masina indrindra izy mandra-pitsangan'izay mpisorona anankiray mitondra ny Orima sy Tomima. 64 Ny tontalin'ny olona rehetra dia enim-polo amby telon-jato amby roa arivo sy efatra alina, 65 afa-tsy ny ankizilahiny sy ny ankizivaviny fito amby telo-polo amby telon-jato sy fito arivo; ary nisy mpihiralahy sy mpihiravavy roan-jato teo aminy; 66 ny soavaliny dia enina amby telo-polo amby fiton-jato; ny ampondrany dia dimy amby efa-polo amby roan-jato; 67 ny ramevany dia dimy amby telo -polo amby efa-jato; ny borikiny dia roa-polo amby fiton-jato sy enina arivo.
68 Ary ny sasany tamin'ny lohan'ny fianakaviana, rehefa tonga tao an-tranon'i Jehovah tany Jerosalema, dia nanatitra tamin'ny sitrapo hananganana ny tranon'Andriamanitra eo amin'ilay efa niorenany. 69 Nanome araka izay nananany avy izy hanampy ny vola voavory hanaovana ny asa, dia darika ▼
▼ Izahao 1 Tan. xxix. 7
volamena arivo sy enina alina ary mane volafotsy dimy arivo ary akanjo-mpisorona zato. 70 Ary samy tafapetraka teny an-tanànany avy ny mpisorona sy ny Levita sy ny sasany tamin'ny vahoaka sy ny mpihira sy ny mpiandry varavarana ary ny Netinima, dia ny Isiraely rehetra samy tao an-tanànany avy.